Aqoonsiga iyo Awoodinta Awooda Qoyska ee Waxbarashada
Minnesota Comeback, JD Graves Foundation, McKnight Foundation, iyo Minneapolis Foundation wadaagaan ballan qaadka horumarinta codka qoyska iyo codka bulshada ee isbedelka waxbarashada. Waxaan wadaagnaa faham in qaar badan oo ka mid ah caqabadaha adag ee adag ee dugsiyada dadweynaha ee Minnesota ay ku saleysan yihiin nidaamka waxbarashada. Oo aynu wadaagno aamino ah in qoysasku ay yihiin kuwa ugu saameynaya saamileeyaal nidaamyada isbedelka waxbarashada. Ururradeenu waxay u shaqeynayaan siyaabo kala duwan waxaana ay ku jiraan qodobo kala duwan iyada oo loo marayo jahwareer ku lug lahaanshaha hawlaha waalidka. Si kastaba ha ahaatee, waxaan aqoonsannay isku-filnaansho ku filan shaqadeena si aan u bilowno safar waxbarasho oo wadajir ah, waxaan rajeyneynaa in aan si wanaagsan u fahanno sida xubnaha bulshada ay u qeexayaan ka-qaybgalka guusha ee nidaamka isbedelka nidaamyada.
Ugu dambeyntii, waxaan maalgelinay bulsho isku duubnayd Nofembar 14, 2017. Iyadoo ku dhawaad 30 qof oo wada-hawlgal ah oo ka tarjumaya kala-duwanaanshaha beesheena iyo keenista aragtida iyo fikradaha asaasiga ah ee waayo-aragnimada bulshada, waxaan raadinay mowduuca kaqaybqaadashada qoyska, waxbarashada dadweynaha iyo isbedelka nidaamyada. Nidaamka ka qaybqaadashadu wuxuu ka kooban yahay wadahadal koox yar, aragti wadaag iyo bandhigyo ah oo ay sameeyeen saddex qabanqaabiye bulsheed oo la wadaagay waayo-aragnimadoodii horseeday nidaamyada guulaha isbeddelka ee isbeddelka ee Twin Cities. Soo bandhigidu waxay cambaareeyeen wadahadal iyo fikrado ku saabsan baadhitaan qotodheer iyo codsi ah markaan ka shaqeyno si loo aqoonsado loona kordhiyo waxqabadka qoyska ee waxbarashada.
Dukumiintigani waxay soo bandhigaysaa soo koobid iyo is-qoris wada-hadalkayaga bisha November. Isku duwidda ayaa taageertay waxbarashadayada ku saabsan ka qayb qaadashada qoyska ee isbeddelka nidaamyada, waxaana rajeyneynaa in ay ku dhaleeceynayso isku dheelitirnaanta akhristayaasha. Waxaan si qoto dheer uga mahadcelineynaa wada-hawlgalayaasha beesha oo la wadaagay xikmadooda iyo fikraddeenna annaga, iyo yaa ka wakiil ah "qorayaasha" fikradaha soo bandhigay halkan.